YEYINTNGE(CANADA): Thursday, February 21
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ(UNFC) မှ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ေ ဆာင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ(UNFC) မှ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တို့ ပူးတွဲကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရ ၂၀
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ဝ ရက်။
၁။ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ဖြစ်ကြသည့် ဦးခင်ရီ၊ ဦးအုန်းမြင့်၊ ဒုတိယ ရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်(၁၁) ဦးသည် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) မှ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာ၊ ဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာလဂျာ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် (၁၂)ဦးနှင့် ပထမအကြိမ် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်သည့် Framework Meeting ကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၂ဝ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ၉ နာရီမှ ၁၇ နာရီအထိ ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။
၂။ နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည် အောက်ပါခေါင်းစဉ်များကို ရင်းရင်းနှီးနှီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်-
( ခ )နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက် လိုအပ်သောမူဘောင်
( ဂ )နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက် လိုအပ်သောအချိန်ဇယား
(ဃ) နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် ချမှတ်ရမည့် အစီအစဉ်များ ကြိုတင်ညှိနှိုင်း ရေးဆွဲခြင်း
( င ) နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်နေရာ
( စ ) Mediator, Monitor, Observer နှင့်သက်သေများ ထားရှိနိုင်ရေး
(ဆ) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်(၆)ချက်
( ဇ ) အထွေထွေကိစ္စရပ်များ
၃။ အကြိုပြင်ဆင်ရေးကာလနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်စဉ်တစ်လျှောက်တွင် UNFC အဖွဲ့အစည်းများ၏ နယ်မြေများအတွင်း လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့်အခြေခံစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးကဏ္ဍများတွင် ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာမှ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
၄။ နှစ်ဖက်အလုပ်အဖွဲ့များ(Technical Team)သည် အခါအားလျော်စွာ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၅။ ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို နှစ်လအတွင်းထပ်မံကျင်းပရန် နှစ်ဖက်သဘော တူညီခဲ့ကြပါသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/21/20130အကြံပြုခြင်း
" ဥပဒေဖောက်ဖျက်လာလျှင် ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မထောက်၊ လူကြီးသားသမီးလည်း အရေးယူမည် " MEDIA One Journal, Vol. 1, No. 28 MYANMAR NEWS WEEK JOURNAL, အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၆၅)၊ (၁၇-၁-၂၀၁၃)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/21/2013 1 အကြံပြုခြင်း
ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းအား အကြောင်းပြပြီး ဖျက်ဆီးခဲ့သော လူတစ်စုအား အမှုဖွင့် အရေးယူ
"တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ အတွက် ILO က သင်တန်းဖွင့်မည်"
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ အတင်းအဓမ္မလယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်း တာတွေနဲ့အဓမ္မ လုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုတွေ ပပျောက်စေဖို့အတွက် တပ်မတော် အရာရှိကြီးတွေကို မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် ILO က လာမယ့် မတ်လဆန်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် သင်တန်းပေးဖို့ရှိတယ်လို့ စုံစမ်း သိရပါတယ်။
ဒီသင်တန်းကို ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကလောမြို့က စစ်ဦးစီး တက္ကသိုလ်မှာပို့ချပေးမှာဖြစ်ပြီးဒီသင်တန်းနဲ့ပက်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ILOရဲ့ စီမံချက်အရာရှိ ဦးချစ်တင်က RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။
"ဒီသင်တန်းက အင်မတန် အရေးကြီးတယ် ဗိုလ်မှုးကြီးတွေ၊ ဒုတိယ ဗိုလ်မှုးကြီးတွေကို ပို့ချရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကတော့ စစ်မက်ဖြစ်ပွားတဲ့ ဒေသတွေမှာ ပေါ်တာအဖြစ်နဲ့ ခိုင်းစေမှု မရှိအောင်ရယ်၊ တပ်မတော်ကတစ်ပိုင်တစ်နိုင် မြေယာသိမ်းပိုက်ပြီးရင် နောက်ဆုံး ဖြစ်လာ
တော့ အဓမ္မလုပ်အားပေး ခိုင်းစေမှု ဖြစ်လာတော့။အဓမ္မလုပ်အားပေး ခိုင်းစေမှုနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ"
ယနေ့အချိန်ထိ နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အစိုးရစစ်တပ်အတွင်းကကလေးစစ်သား၆၄ဦးကိုမိသားစုထံ ပြန်ပို့ပြီး
ယနေ့ထုတ် Hot news ဂျာနယ်မှာဖော်ပြထားသောဆောင်းပါးပါ။
ဆောင်းပါးရှင် ကိုရွှေအောင်သင်းနှင့် ဖော်ပြပေးပါသော Hot News ဂျာနယ်အယ်ဒီတာအဖွဲ့အား
တိုင်းပြည်တခုကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ စီမံကိန်းတွေရေးဆွဲတဲ့အခါ၊ လိုအပ်မယ့် အခြေခံအဆောက်အဦ infrastructure တွေအဖြစ်၊ ပညာရေးကဏ္ဍ educational sector ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ အချိန်တို အတွင်းမှာ အတတ်ပညာရှင်တွေကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်မယ့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပညာရေး vocational education ဟာ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနိမ့်ကျနေဆဲ underdevelopment တိုင်းပြည်တွေရဲ့ infrastructure လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ 'အမေစု' ကတော့ 'secondary education' ရယ်လို့ သုံးနှုံးပါတယ်။
'အမေစု' ပြောတဲ့ 'secondary education' တနည်းအားဖြင့် 'vocational education' ဟာ၊ မြန်မာပြည်မှာ ကွယ်ပျောက်ခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ် (၂) နှစ် two decades လောက်ကြာခဲ့ပါပြီ။ စက်မှု၊ စိုက်ပျိုးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း 'Technical, Agricultural and Vocational education' ပညာရေးကဏ္ဍမှာ၊ ဆယ်စုနှစ် (၂) နှစ်အတွင်း လက်တဲ့စမ်းခဲ့သူတွေကြောင့် လူထု public ကြားကို တကယ်ရောက်ပြီး၊ အကျိုးပြုနိုင်မယ့် စိုက်ပျိုးရေးအတတ် ပညာရှင်တွေ၊ မွေးမြူရေးအတတ် ပညာရှင်တွေနဲ့ စက်မှုလက်မှုအတတ် ပညာရှင်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရပါတယ်။ အသိပညာ academic education နဲ့ အတတ်ပညာ vocational education ကို၊ အချိန်တိုအတွင်း ပေါင်းစပ်ရန် အမျှော်အမြင့်မဲ့စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေကြောင်းလည်း၊ ဆယ်စုနှစ် (၁) နှစ် ခွဲ အတွင်း ပညာရေးကဏ္ဍမှ မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ လူငယ်တွေဟာ၊ ဘဝရပ်တည်ရေး professional life မှာ အခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရသလို၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး national development ကဏ္ဍမှာလည်း၊ နှောင့်နှေးမှုတွေ ရှိလာတာ၊ ငြင်းမရအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ပထမဆုံးမြန်မာလူမျိုး အင်ဂျင်နီယာကို၊ မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း vocational education ပညာရေးဆိုင်ရာ သမိုင်းအထောက်အထား အပါအဝင်၊ ပထမဆုံးမြန်မာလူမျိုး အင်ဂျင်နီယာ 'ကျောက်စာဝန် ဦးမြ' ဆရာအဖြစ်အမှုထမ်းသွားတဲ့ အင်းစိန် GTI မှ၊ အတတ်ပညာရှင်တွေရဲ့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး national development ကဏ္ဍမှာ၊ စွမ်းဆောင်ခဲ့မှု သမိုင်းအထောက်အထားတွေဟာ၊ လူတစု၊ အသင်းအဖွဲ့တခု၊ အဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့ လွဲမှားသော အယူအဆ၊ အပြုအမူတွေအောက်မှာ ပျောက်ကွယ်မသွားစေဖို့၊ တတ်နိုင်တဲ့ဖက်မှ ထိန်းသိမ်းပေးရန်၊ အရေးကြီးနေပြီလို့ ယူဆမိပါတယ်။
ကိုးကားကူယူဖော်ပြခြင်း။ (၁၂)ကြိမ်မြောက် ဂျီတီအိုင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်း သူဟောင်းများ အာစရိယပူဇော်ပွဲအမှတ်တရ "ဂျီတီအိုင် ပုံရိပ်သမိုင်းမှတ်တမ်းများ" စာအုပ်၊ (၂၀၀၇) ခုနှစ်။ Posted by ကိုထွန်း
ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းအား အကြောင်းပြပြီး ဖျက်ဆီးခဲ့သေ...